Tenga 3D scanner: maitiro ekusarudza akanakisa | hardware yemahara
Tenga 3D scanner: maitiro ekusarudza akanakisa
Isaac | | 3D kudhinda
Pamusoro pekukwanisa kuzvigadzira iwe geometry yechidimbu chaunoda kudhinda pane chako 3D printer uchishandisa software, pane zvakare imwe nzira iri nyore inogona kukopa zvinhu zviripo nemazvo. Zviri pamusoro 3d scanner, iyo ichatarisira kutarisa pamusoro pechinhu chaunoda uye kuchishandura kudhijitari format kuitira kuti iwe ugone kuibata zvakare kana kuidhinda sezvairi kuita replicas.
Mugwaro rino iwe uchaona zvavari. iwo akanakisa 3D scanner uye kuti ungasarudza sei yakanyanya kufanira zvinoenderana nezvamunoda.
3D scanner... Ona maficha Ona kupiwa
Inncen Pop 3D Scanner,... Ona maficha Ona kupiwa
Kupenya 3D EINSCAN-SP -... Ona maficha Ona kupiwa
HE3D Scanner Kit... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	3D scanner...
Unhu hwemutengo	Inncen Pop 3D Scanner,...
Chatinoda	Kupenya 3D EINSCAN-SP -...
1 Yakanakisa 3D scanners
1.1 Kupenya 3D EINSCAN-SP
1.2 Inopenya 3D Uno Can
2 Chii chinonzi 3D scanner
2.1 3D scanner kuti inoshanda sei
2.2.2 kumba 3d scanner
2.3 3D scanner application
2.4 Maitiro ekusarudza 3D scanner
Yakanakisa 3D scanners
Kune akawanda ane mukurumbira mabhureki, akadai ane mukurumbira German Zeiss, Shining 3D, Artec, Polyga, Peel 3D, Phiz 3D Scanner, nezvimwewo, zvichiita kuti zvinyanye kuoma kusarudza. Kana uine kusahadzika kuti ndeipi 3D scanner yekutenga, heano mamwe acho. mhando dzakanakisa Zvatinokurudzira kutenga zvakanaka:
Kupenya 3D EINSCAN-SP
Kupenya 3D EINSCAN-SP -...
Este 3D scanner ine chena mwenje tekinoroji iri pakati pezvakanakisa kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chehunyanzvi. Sarudzo yaro inosvika 0.05 mm, inotora kunyange diki ruzivo. Inogona kuongorora manhamba kubva pa30x30x30 mm kusvika 200x200x200 mm (ine turntable) uyewo mamwe makuru e1200x1200x1200 mm (kana akashandiswa nemaoko kana netripod). Uye zvakare, ine yakanaka yekumhanyisa kumhanya, kugona kutumira kune OBJ, STL, ASC uye PLY, automatic calibration system, uye USB connector. Inoenderana neWindows.
Inopenya 3D Uno Can
Inopenya 3d Uno Inogona Se Uno...
Iyi imwe modhi yeiyi brand ine mukurumbira yakachipa pane yapfuura, asi inogona zvakare kuve yakanaka sarudzo kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chekushandisa nehunyanzvi. shandisawo chena ruvara tekinoroji, ine zvigadziriso zve 0.1 mm uye kugona kuongorora manhamba kubva pa30x30x30 mm kusvika 200x200x200 mm (paturntable), kunyangwe uchigona kuishandisawo nemawoko kana patripod yayo yenhamba dzinosvika 700x700x700 mm. Iyo ine yakanaka yekumhanyisa kumhanya, inobatanidza kuburikidza ne USB, uye inogona kushanda neOBJ, STL, ASC uye PLY faira mafomati senge yapfuura. Inoenderana neWindows.
Creality 3D - Kiti ye...
Iyi imwe mhando huru yakagadzira scanner ye 3D modelling nyore chaizvo kushandisa, nekugadzirisa otomatiki, pasina kudikanwa kwekugadzirisa kana kushandisa mamaki. Inobatanidza ne USB uye inoenderana neWindows, Android uye macOS. Pamusoro pezvo, ine hunyanzvi hwepamusoro hunosvika 0.1 mm uye sarudzo ye 0.5 mm, uye inogona zvakare kuve yakanakira kushandiswa kwehunyanzvi nekuda kwehunhu hwayo uye mhando. Kana ari maekiseni ekuongorora, iwo akakura chaizvo, kutarisa zvikamu zvakakura.
Iyi 3D scanner kubva kuSpanish brand BQ ndeimwe yakanaka sarudzo kana iwe uchitsvaga chinhu chinokwanisika kune DIY. Iyo inokurumidza 0.5mm chaiyo scanner ine mhando Logitech C270 HD kamera, maviri Kirasi 1 mutsara lasers, USB yekubatanidza, Nema stepper motors, ZUM mutyairi, anokwanisa kutumira kunze kune G-Code uye PLY, uye inopindirana neLinux neWindows anoshanda masisitimu.
Imwe nzira kune yapfuura. A 3D scanner ine a 0.3mm kururama, Dual Infrared Sensors (Ziso Rakachengeteka), ine Yakadzama Makamera, Inokurumidza Kuongorora, RGB Kamera yeTexture Capture, OBJ, STL, uye PLY Export Tsigiro, Wired kana Wireless Kugona, 5 Modes nzira dzakasiyana dzekuongorora, uye inoenderana neAroid, iOS, macOS. uye Windows inoshanda masisitimu.
Chii chinonzi 3D scanner
Un 3D scanner chishandiso chinokwanisa kuongorora chinhu kana chiitiko kuwana data pane chimiro, manyorerwo, uye dzimwe nguva ruvara zvakare. Ruzivo irworwo rwunogadziriswa uye kushandurwa kuita matatu-dimensional edhijitari modhi anogona kushandiswa kuashandura kubva pasoftware kana kuadhinda paprinta yako ye3D uye kuita makopi chaiwo echinhu kana chiitiko.
Mashandiro anoita mascanner aya anowanzo tarisa, achigadzira gore remareferensi akatenderedza pamusoro pechinhu kuti abudise iyo geometry chaiyo. Naizvozvo, 3D scanners akasiyana nemakamera akajairwaKunyangwe ivo vaine koni-yakaita munda wekuona, makamera anotora ruzivo rwemavara kubva kumusoro mukati memunda wekuona, nepo 3D scanner inotora ruzivo rwenzvimbo uye matatu-dimensional nzvimbo.
Mamwe ma scanner haape modhi yakazara ne scan imwe chete, asi panzvimbo pacho inoda mapfuti akawanda kuti uwane zvikamu zvakasiyana zvechikamu uye wozosonedza pamwechete uchishandisa software. Kunyange zvakadaro, ichiri a zvakanyanya kunyatsojeka, kugadzikana uye nekukurumidza sarudzo kuwana geometry yechimwe chikamu uye kukwanisa kutanga kuchidhinda.
3D scanner kuti inoshanda sei
Iyo 3D scanner inowanzo shanda neimwe nzira yemwaranzi inoburitswa sea chiedza, IR, kana laser beam iyo inozoverenga nhambwe pakati pechinhu chinoburitsa uye chinhu, ichimaka nzvimbo inotarirwa yenzvimbo uye nhevedzano yemapoinzi pamusoro pechikamu chichakopwa, nezvirongwa zvechimwe nechimwe. Kuburikidza nehurongwa hwemagirazi, inotsvaira pamusoro uye inotora akasiyana makongisheni kana mapoinzi kuti iwane matatu-dimensional replica.
Zvichienderana nechinhambwe chechinhu, kurongeka kwaunoda, uye ukuru kana kuoma kwechinhu chaungada. mumwe kutora kana kupfuura mumwe.
Kune 2 mhando dze 3D scanner zvakakosha, zvichienderana nenzira yavanoongorora:
Contact: Aya marudzi ema 3D scanner anoda kutsigira chikamu chinonzi tracer (kazhinji simbi yakaoma kana kuti sapphire tip) pamusoro pechinhu. Nenzira iyi, mamwe ma sensors emukati anozosarudza nzvimbo yenzvimbo ye probe kuti idzore nhamba. Iwo anoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yekutonga kwemaitiro ekugadzira uye nekunyatso 0.01 mm. Zvakadaro, haisi sarudzo yakanaka kune yakapfava, yakakosha (sezvivezwa zvenhoroondo), kana zvinhu zvakapfava, sekuti chinyoreso kana chinyoreso chinogona kushandura kana kukuvadza pamusoro. Kureva kuti ingava scan inoparadza.
hapana kuonana: ndidzo dzakapararira uye dziri nyore kuwana. Ivo vanodaidzwa kudaro nekuti havadi kuonana uye saka havazokuvadza chikamu kana kuchichinja neimwe nzira. Panzvimbo pekuferefeta, ivo vachashandisa kuburitswa kweimwe chiratidzo kana radiation senge ultrasound, IR mafungu, mwenje, X-rays, nezvimwe. Ndiwo akapararira uye ari nyore kuwana. Mukati meizvi, zvakare, mune mhuri mbiri huru:
Assets: Midziyo iyi inoongorora chimiro chechinhu uye, mune dzimwe nguva, ruvara. Zvinoitwa nekuyera kwakananga kwepasi, kuyera polar coordinates, makona uye madaro kuunganidza matatu-dimensional geometric ruzivo. Zvese nekuda kwekuti inogadzira gore remapoinzi asina kubatana ayo anoyera nekuburitsa imwe mhando ye electromagnetic beam (ultrasound, X-ray, laser,...), uye iyo inoshandura kuita maporigoni ekuvakazve uye kutumira kunze kwenyika iyo 3D CAD modhi. . Mukati meizvi iwe unowana mamwe ma subtypes akadai se:
Nguva yekubhururuka: rudzi rwe 3D scanner inoshandisa lasers uye inoshandiswa zvakanyanya kuongorora nzvimbo dzakakura, senge geological formations, zvivakwa, nezvimwe. Zvinobva pa Kutonhora. Izvo hazvina kunyatsojeka uye zvakachipa.
katatu: Inoshandisawo laser ye triangulation, nedanda rinorova chinhu uye nekamera inoona laser point uye chinhambwe. Aya ma scanner ane huchokwadi hwepamusoro.
mutsauko wechikamu: inoyera mutsauko wechikamu pakati pechiedza chakabudiswa uye chakagamuchirwa, inoshandisa kuyerwa uku kufungidzira chinhambwe chechinhu. Iyo chaiyo mupfungwa iyi ndeyepakati pakati peaya maviri apfuura, yakakwira zvishoma pane ToF uye yakadzikira zvishoma pane katatu.
conoscopic holography: inyanzvi yeinterferometric iyo danda rinoratidzwa kubva pamusoro richipfuura nepakati pekristaro ine birefringent, kureva, kristaro ine ma indices maviri ekuona, imwe yakajairwa uye yakagadziriswa uye imwe inoshamisa, inova basa rekona yekuitika kwechiitiko. mwaranzi pamusoro pekristaro. Nekuda kweizvozvo, mirazvo miviri yakafanana inowanikwa iyo inogadzirwa kupindira uchishandisa cylindrical lens, kupindira uku kunotorwa nesensor yekamera kamera inowana pateni yemafringe. Kuwanda kwekukanganisa uku ndiko kunoratidza kureba kwechinhu.
chiedza chakarongeka: Ratidza chimiro chechiedza pachinhu uye ongorora deformation yepateni inokonzerwa neiyo geometry yechiitiko.
modulated light: vanoburitsa mwenje (kazhinji ine mitsetse yeamplitude muchimiro chesynodal) ichiramba ichichinja muchinhu. Iyo kamera ichatora izvi kuona chinhambwe.
Zvikwereti: Iyi mhando ye scanner ichapawo ruzivo rwechinhambwe uchishandisa mamwe radiation kuitora. Ivo vanowanzo shandisa maviri emakamera akaparadzana anonangidzirwa kunzvimbo kuti vawane ruzivo rwemativi matatu nekuongorora akasiyana mifananidzo yakatorwa. Izvi zvinoongorora chinhambwe kune imwe neimwe poindi uye nekupa mamwe marongero kuti aumbe iyo 3D. Muchiitiko ichi, zvigumisiro zviri nani zvinogona kuwanikwa kana zvakakosha kutora chimiro chepamusoro chechinhu chakaongororwa, pamwe chete nekuchipa. Musiyano neaya anoshanda ndewekuti hapana mhando yemwaranzi yemagetsi inoburitswa, asi vanongogumira pakubata izvo zvagara zviripo munzvimbo, sechiedza chinooneka chinoratidzwa pachinhu. Kune zvakare zvimwe zvakasiyana-siyana zvakadai se:
stereoscopic: Vanoshandisa musimboti wakafanana nephotogrammetry, vachiona kureba kwepixel imwe neimwe mumufananidzo. Kuti aite izvi, anowanzo shandisa makamera maviri akapatsanurwa evhidhiyo anonongedzera pachiitiko chimwe chete. Kuongorora mifananidzo yakatorwa nekamera yega yega, zvinokwanisika kuona aya madaro.
Silhouette: Vanoshandisa zvikeche zvakagadzirwa kubva munhevedzano yemifananidzo yakatenderedza chinhu chine mativi matatu kuti vayambuke kuti vagadzire fungidziro yekuona kwechinhu. Iyi nzira ine dambudziko kune mhango zvinhu, sezvo isingatore zvemukati.
Image-based modelling: Kune dzimwe nzira dzinobatsirwa nemushandisi zvinoenderana nephotogrammetry.
Vazhinji vashandisi vanowanzobvunza kana uchikwanisa shandisa smartphone sekunge iri 3D scanner. Chokwadi ndechekuti nharembozha nyowani dzinogona kushandisa iwo makuru makamera sensors kukwanisa kutora nhamba dze3D nekuda kwemamwe maapplication. Zviripachena ivo havazove neiyo chaiyo uye nehunyanzvi mhedzisiro seyakazvitsaurira 3D scanner, asi inogona kubatsira kune DIY.
zvimwe zvakanaka mapurogiramu emafoni efoni iOS/iPadOS uye Android zvaunogona kudhawunirodha uye kuyedza ndezvi:
kumba 3d scanner
Vanowanzo kubvunza kana uchikwanisa gadzira kumba 3d scanner. Uye chokwadi ndechekuti kune mapurojekiti evagadziri anogona kukubatsira zvakanyanya mune izvi, senge OpenScan. Iwe zvakare uchawana mamwe mapurojekiti akavakirwa paArduino uye anogona kudhindwa kuti uunganidze iwe pachako sezvizvi, uye unogona kuwana nzira yekushandura xbox kinect kuita 3d scanner. Zviripachena, iwo akanaka semapurojekiti eDIY uye ekudzidza, asi haugone kuwana mhedzisiro yakafanana nenyanzvi.
Kana ari 3D scanner application, inogona kushandiswa kune mamwe akawanda mashandisiro kupfuura zvaungafungidzira:
maindasitiri application: Inogona kushandiswa kwemhando kana dimension control, kuona kana zvikamu zvakagadzirwa zvinosangana nezvinodiwa kushivirira.
Reverse mainjiniya: anobatsira chaizvo kuwana chaiyo yedhijitari modhi yechinhu kuitira kuti uchidzidze uye ugochigadzira zvakare.
As-built zvinyorwa: Chaiyo modhi yemamiriro echivakwa kana kuvaka anogona kuwanikwa kuita mapurojekiti, kugadzirisa, nezvimwe. Semuyenzaniso, mafambiro, deformations, zvichingodaro, zvinogona kuwonekwa nekuongorora mamodheru.
digital varaidzo: Inogona kushandiswa kuongorora zvinhu kana vanhu kuti vashandise mumafirimu nemitambo yemavhidhiyo. Semuenzaniso, unogona kutarisisa mutambi wenhabvu chaiye uye kugadzira modhi ye3D yekuiraramisa kuitira kuti ive yechokwadi mumutambo wevhidhiyo.
Ongororo nekuchengetedza nhaka yetsika nemagariro: Inogona kushandiswa kuongorora, kunyora, kugadzira zvinyorwa zvedhijitari, uye kubatsira mukuchengetedza nekuchengetedza nhaka yetsika nenhoroondo. Somuenzaniso, kuongorora zvivezwa, matongo, mummies, mabasa ounyanzvi, etc. Replicas chaiyo inogonawo kugadzirwa kuti ibudise pachena uye kuti yekutanga haina kukuvara.
Gadzira madhijitari emhando dzezviitiko: Mamiriro kana nharaunda anogona kuongororwa kuti aone kukwirisa kwenzvimbo, kushandura mateki kana nzvimbo kuita yedhijitari 3D fomati, kugadzira 3D mepu, nezvimwe. Mifananidzo inogona kutorwa ne3D laser scanners, neRADAR, nemifananidzo yesatellite, nezvimwe.
Maitiro ekusarudza 3D scanner
Panguva ye sarudza yakakodzera 3D scanner, kana uri kuzeza pakati pemamodheru akati wandei, unofanirwa kuongorora nhevedzano yehunhu kuti uwane iyo inonyatsoenderana nezvido zvako uye bhajeti rauinaro rekudyara. Pfungwa dzekuchengeta mupfungwa ndeidzi:
Budget: Izvo zvakakosha kuti uone kuti yakawanda sei yaunogona kuisa mune yako 3D scanner. Kune kubva ku200 kana € 300 kune ayo anokosha zviuru zvemaeuro. Izvi zvinoenderanawo nekuti ichave yekushandisa pamba here, pazvisingakodzeri kuisa mari yakawandisa, kana kushandiswa kwemaindasitiri kana nehunyanzvi, uko mari ichabhadhara.
Kururama: ndechimwe chezvinhu zvakakosha. Izvo zviri nani kurongeka, mhedzisiro iri nani yaunogona kuwana. Kumashandisirwo epamba kuderera kwakaderera kunogona kukwana, asi kune zvehunyanzvi maapplication zvakakosha kuve nemazvo kuti uwane diki diki remhando ye3D. Mazhinji mascanner ekutengesa anowanzo kuve pakati pe0.1 mm kusvika 0.01 mm, kubva pazasi chaiyo kusvika pakakwirira zvakateerana.
Kugadzirisa: haifanirwe kuvhiringidzwa nekunyatso, kunyangwe mhando yemhando ye3D yakawanikwa ichaenderanawo nayo. Nepo iko kurongeka kuchireva dhigirii rekurongeka kwakazara kwechishandiso, resolution ndiyo diki chinhambwe chinogona kuvapo pakati pemapoinzi maviri mukati meiyo 3D modhi. Kazhinji inoyerwa mumamirimita kana mamicrons, uye iyo diki inova nani mhedzisiro.
Kuongorora kumhanya: inguva inotora kuita scan. Zvichienderana nehunyanzvi hunoshandiswa, iyo 3D scanner inogona kuyerwa neimwe nzira kana imwe. Semuyenzaniso, magadzirirwo emwenje-based scanner anoyerwa muFPS kana mafuremu pasekondi. Mamwe anogona kuyerwa mumapoinzi pasekondi, nezvimwe.
Kunakidzwa kwekushandiswa: Ndiyo imwe pfungwa yakakosha yekufunga nezve pakusarudza 3D scanner. Nepo mazhinji atove nyore kushandisa uye akakwenenzverwa zvakakwana kuti basa riitwe pasina kuwanda kwemushandisi, iwe zvakare uchawana mamwe akaomarara kupfuura mamwe.
chikamu saizi: Sezvinongoita maprinta e3D ane miganhu, 3D scanner anoitawo. Zvinodiwa nemushandisi anoda kudhijita zvinhu zvidiki hazvina kufanana neanoda kuzvishandisa kuzvinhu zvikuru. Muzviitiko zvakawanda anoshandiswa kuongorora zvinhu zvehukuru hwakasiyana, saka zvinofanirwa kukwana maererano nehudiki uye huwandu hwepamusoro hwaunotamba nahwo.
Kubatika: Zvakakosha kuona kuti mapfuti akarongerwa kutorwa kupi, uye kuti zvinoda kuve nyore kutakura uye kutora zviono munzvimbo dzakasiyana, nezvimwe. Kune zvakare ane bhatiri-powered kuti akwanise kubata asingavhiringike.
Compatibility: Zvakakosha kusarudza 3D scanners inoenderana nepuratifomu yako. Mamwe ari muchinjika-chikuva, achienderana neakasiyana masisitimu anoshanda, asi kwete ese.
Software: Ndiyo inonyanya kutyaira iyo 3D scanner, vagadziri vemidziyo iyi vanowanzo shandisa mhinduro dzavo. Mamwe anowanzo ane mamwe mabasa ekuongorora, modhi, nezvimwe, mamwe ari nyore. Asi chenjera, nekuti zvimwe zvezvirongwa izvi zvine simba chairo, uye zvinoda zvishoma zvinodiwa kubva pakombuta yako (GPU, CPU, RAM). Zvakare, zvakanaka kuti mugadziri anopa rutsigiro rwakanaka uye anogaro gadziridza.
Kugadziriswa: Zvakanaka zvakare kuti mudziyo wekutora unochengetedzwa nekukurumidza uye nyore sezvinobvira. Mamwe ma 3D scanner anoda mamwe macheki (kucheneswa kwemaziso,…), kana kuti anoda manyorerwo ekugadzirisa, mamwe anozviita otomatiki, nezvimwe.
Pakati: Izvo zvakakosha kuti uone kuti mamiriro acho achave api panguva yekutorwa kweiyo 3D modhi. Zvimwe zvacho zvinogona kukanganisa mamwe maturusi uye matekinoroji. Semuenzaniso, huwandu hwechiedza, humidity, tembiricha, nezvimwe. Vagadziri vanowanzo ratidza mitsara iyo mamodheru avo anoshanda zvakanaka, uye iwe unofanirwa kusarudza imwe inoenderana nemamiriro auri kutsvaga.
Yakanakisa Resin 3D Printers
Printer zvikamu uye kugadzirisa
Filaments uye resin ye 3D printers
Akanakisa Maindasitiri e3D Printer
Akanakisa 3D maprinta epamba
Yakanakisa yakachipa 3D printers
Nzira yekusarudza yakanakisa 3D printer
Zvese nezve STL uye 3D mafomu ekudhinda
Mhando dze 3D maprinta
3D Kudhinda Kutanga Gaidhi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » 3D kudhinda » Tenga 3D scanner: maitiro ekusarudza akanakisa
Ndeipi resin 3D printer yekutenga
Arduino Timer: tamba nenguva mumapurojekiti ako